Bọchị Ndị Nne na Apple vidiyo | Esi m mac
Sundaybọchị Sọnde a, Mee 1, Apple wepụtara vidiyo ọhụrụ nke ọ na-egosi anyị ụfọdụ onyonyo na-emetụ n'ahụ ime emume ubochi ndi nne. Typesdị vidiyo ndị a dị egwu n'ihi na na mgbakwunye na nghọta nke otu foto ahụ ha gosiri anyị, Apple kwụsịrị site na ịkọwa na eserela foto ndị a niile na iPhone ma doro anya na mgbakwunye na ịmepụta ụdị ekele niile maka ndị nne, ọ bụ ezigbo ụzọ iji gosipụta ogo nke igwefoto iPhone.
Nkọwa ọzọ nke vidio a bụ na ọ ruru mba ndị a na-eme ememe ya na May 1, dị ka ọ dị na Spain na nke ahụ bụ na United States ọ bụghị ụnyaahụ ụbọchị nne a. N'agbanyeghị nke a, ụmụ okorobịa si Cupertino abịaghị n'oge maka nhọpụta na mba ndị ọzọ ebe a na-eme ụbọchị a ma ha wepụtara vidiyo anyị hapụrụ mgbe ịwụchara.
Nke a bụ vidiyo mmetụta uche nke Apple wepụtara Sunday, Mee 1:
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ mgbasa ozi Apple nwere ike ịhụ ngwaọrụ ha nwere na katalọgụ ngwaahịa ha, mana oge a ha egosighi iPhone ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, naanị onyonyo. N'oge na-adịbeghị anya anyị na-ahụ ọtụtụ vidiyo ndị a na ọwa gị Youtube ọ dịkwa ka ndị a agaghị akwụsị. Urua ha na ulo oru a di na nwunye nke ọzọ na mgbasa ozi nke ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ iPhone ka protagonist nke ha, oge a na ọ bụ naanị banyere ihe oyiyi raara nye nne.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Bọchị Ndị Nne na Apple vidiyo
Onye nchịkwa malitere imepụta eriri Apple Watch